Ngaphantsi = Ngakumbi | Martech Zone
Ngaphantsi = Ngakumbi
NgoLwesithathu, Agasti 10, 2005 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Kudala ndifuna ukulandela eyam Vula = Ukukhula thumela okwethutyana. Ukuchazwa kweso sithuba kukufumaneka kwempumelelo xa abantu begxila kwindlela ezinokuthi zidityaniswe ngayo nezisombululo zazo. Kukho icala elisecaleni kule nto, kwaye ezo zezenkampani ukunciphisa umda ekusebenzeni kwezisombululo zazo kwingundoqo yendlela ezisetyenziswa ngayo. Ukongeza uninzi lweemveliso, iinkonzo kunye neempawu kunokuba yingozi.
Iinkqubo ziyibiza 'zihamba'.
'Ukuhamba' liphupha elibi kubo bonke abaphuhlisi. Kwenzeka xa isicwangciso sophuhliso esiluqilima singagcinwa kwaye singathotyelwa. Iimpawu ziyaqhubeka ukuya Ngena ngaphakathi ide iprojekthi ikude nolawulo kangangokuba ayide igqitywe. Okona kubi kukuba iyagqitywa kwaye inexabiso elingenakoyiswa.
Ndingangenisa ukuba iinkampani, kwaye iimveliso kunye neenkonzo zabo nazo zinokubandezeleka 'zihamba'. Ngokungathinteli inkampani yakho kunye neemveliso kunye neenkonzo zeshishini lakho eliphambili, uqala ukuleqa imijelo yemvula, ucinga ukuba kukho inkunzi ekufuneka ibekho apha okanye phaya. Nangona kunjalo, awukhathaleli ukubona umonakalo onawo kugxilwe kwishishini lakho, kugxilwe kubasebenzi bakho kunye nolwazi, kunye noxinzelelo olongezelelekileyo olubeka kwimveliso, inkxaso, ukuhanjiswa, njl.
Nanini na xa uthatha isigqibo sokujonga ezinye iimveliso, iinkonzo, okanye amanqaku, jonga ukuba ngaba ikhona inkampani esele ikho njengenxalenye yeshishini labo. Ngaba ungayenza bhetele kunabo? Ngaba inkampani yakho iyayixhasa loo nto kwaye iqhubeke nokugcina ubuchwephesha kumbindi wakho? Ngaba abasebenzi bakho baya kufuna ukuyixhasa?
Ekugqibeleni, ukuleqa umnyama kunokwaphula nje.
tags: uphuhliso lwesicelozihambainqaku lokuhambaIimbonakaloNgaphantsielula
Yiloo nto UGqirha ayaleleyo?